Isifinyezo esithi "Iqiniso mayelana necala lakwaSavolta", ngu-Eduardo Mendoza | Izincwadi Zamanje
Isifinyezo esithi "Iqiniso ngecala leSavolta", lika-Eduardo Mendoza
I-Encarni Arcoya | | Amabhuku, Literatura
U-Eduardo Mendoza washicilela incwadi yakhe "Iqiniso ngodaba lweSavolta" ngonyaka 1975. Le ncwadi ingabhekwa kakhulu njengendawo yokuqala yendaba yamanje. Kule noveli yabaseshi, ngaphandle kokulahla ukusetshenziswa kwamasu wokuhlola, uMendoza unikeza impikiswano edonsa ukunaka komfundi.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe mayelana nale ncwadi, qhubeka ufunda nathi lokhu isifinyezo esifushane cishe "Iqiniso ngodaba lweSavolta"ngu-Eduardo Mendoza. Uma, ngakolunye uhlangothi, uhlela ukuyifunda kungekudala, kungcono uyeke ukufunda lapha. Isaziso sokungenzeka spoiler!
1 Imicimbi ebaluleke kakhulu encwadini
1.1 Isitatimende esivela kuJavier Miranda
1.2 Ukubulawa kukaSavolta
1.3 UMaria Coral
1.4 Ukufa kweLepprince
2 Isifinyezo seqiniso ngecala lecala lakwaSavolta ngesahluko
2.1 Izahluko zengxenye yokuqala
2.2 Izahluko zengxenye yesibili
3 Abalingiswa abavela eQinisweni ngecala leSavolta
3.2 Isigaba esiphakathi
3.3 Isigaba senhlalo esikhokhelwayo
3.4 Isigaba sabasebenzi
3.5 Abasebenzi abayisipesheli
Imicimbi ebaluleke kakhulu encwadini
"Iqiniso ngodaba lweSavolta" inoveli yozungu lapho i-aindawo yezenhlalo nezombusazwe eBarcelona phakathi kuka-1917 no-1919 (Yeka ukuqondana namuhla!). Umsebenzi, ogxila kwezintshisekelo zawo esiqeshini, ubandakanya nezinto ezintsha ezakhiwe ngesakhiwo nesitayela.
Okulandelayo, sizofingqa kafushane okwenzekayo engxenyeni ngayinye yencwadi.
Isitatimende esivela kuJavier Miranda
Yize umbalisi omkhulu kule noveli kunguJavier Miranda, ufakazi wale micimbi, kukhona nemibhalo enikeziwe ngenqubo yokwahlulela. Isitatimende sombhali esiphambi kwejaji eNew York ngo-1927, esinamanothi amafushane akhiqizwayo, sinikeza imininingwane ebalulekile.
UPaul-André Lepprince ungumFulentshi onemvelaphi engaqondakali othembisa indodakazi ka-Enric Savolta futhi angene ezimbonini zabo zezikhali, lapho ehlela khona ukuthengiswa okungekho emthethweni kwezikhali kumaJalimane phakathi neMpi Yezwe Yokuqala. Kungekudala ngemuva kwalokho, u-Enric Savolta uzofa ekuhlaselweni okusolwa amaphekula avela ezinhlanganweni zabasebenzi.
Empeleni, uLepprince nguyena owayalela ukubulawa kukaSavolta, ngenxa yokwesaba ukutholakala nangenxa yokuthi wayemagange ukulawula inkampani yakhe. UJavier Miranda, othanda ngokujulile uPaul-André Lepprince futhi engazi ngezenzo zakhe zobugebengu, naye uzoba isisulu sakhe: U-Lepprince umcela ukuba ashade noMaría Coral, intombazane eyayibukisa eyayikade iyisithandwa sayo ukuze imnikeze isikhundla senhlalo esinesithunzi; kulapho-ke lapho ethola iqiniso kuye engxoxweni elandiswa engxenyeni emfushane yencwadi.
U-Lepprince wayebulale futhi wakhaphela inkampani yakwa-Savolta, kodwa ukuphela kwempi kwaholela ekuqothulweni kwefektri yezikhali. Ngemuva kokuzama umsebenzi wezepolitiki owehlulekile, uLepprince uyafa ngokumangazayo.
Lapho uLepprince eseshonile, uKhomishani Vázquez utshela uJavier Miranda ngamacala akhe. Ngokushesha ngemuva kwalokho, incwadi evela kuLepprince ifinyelela kuMiranda lapho emazisa khona ukuthi uthathe umshwalense wokuphila ukuze umkakhe nendodakazi yakhe bakwazi ukuwuthatha ngemuva kwesikhashana, ukuze bangavusi izinsolo. Ngemuva kweminyaka embalwa, uMiranda uzama ukuphatha leyo mali. Le noveli iphetha ngencwadi yokubonga evela kuMaría Rosa Savolta, umfelokazi kaLepprince.
Isifinyezo seqiniso ngecala lecala lakwaSavolta ngesahluko
Indaba yeqiniso ngecala likaSavolta lika-Eduardo Mendoza ingahlukaniswa ngokucacile yaba izingxenye ezimbili, futhi ngasinye sazo ezahlukweni eziningana lapho kwenzeka khona imicimbi, njengomfundi, okufanele uyikhumbule kuyo yonke indaba.
Ngakho-ke, sizokwenzela i- isahluko isahluko isifinyezo ukuze wazi ukuthi konke lokhu okungenhla esikubalile kwenzeka kuphi.
Izahluko zengxenye yokuqala
Ingxenye yokuqala yakhiwe ngezahluko ezinhlanu. Ngamunye wabo ubalulekile kukodwa, noma ngabe bekufanele sinamathele kokunye, singasho ukuthi owokuqala nguyena oyinhloko. Lokhu kungenxa yokuthi kulapho saziswa abalingiswa kanye nezimo lapho ngamunye ekhona. Vele, ngincoma ukuthi ube nephepha esandleni ozibhala phansi ngoba zivela zimbalwa futhi zingadida kancane.
Esahlukweni 1, ngaphezu kokuhlangana nabalingiswa, uzophinda ube nezinkomba ezithile kanye nokulandelana okuthi, ngaleso sikhathi, ungaxhumi, noma ucabange ukuthi kunengqondo. Konke kuyadida futhi kuxubeka okwedlule nokwamanje.
Ngokuvamile, ukufingqwa kwalesi sahluko kuzoba kufushane: Ngenxa yendatshana uLepprince, umqondisi wenkampani yakwaSavolta, ayifunda kwiThe Voice of Justice, uhlangana nowesilisa. Lokhu ukwenza ngefemu yabameli baseCortabanyes, ehlobene nenkampani yakwaSavolta, nalapho uJavier Miranda esebenza khona. Lapho bathola ukuthi kunokusatshiswa kwesiteleka enkampanini bese bethatha isinqumo sokuqasha izigebengu ezimbili ezizokwenza isibonelo kubaholi.
Ngaphezu kwalokho kunephathi yangoNyaka Omusha, nokugxuma lapho sibona incwadi efungelwe enohlobo lokuqala lwemicimbi.
Isahluko 2 yisona esifushane kunazo zonke, futhi sikhuluma ngezihloko ezimbili kuphela: ngakolunye uhlangothi, ukuphenywa kwesibili kukaJavier Miranda; ngakolunye uhlangothi, ukulandelana kokudlule komlingisi lapho sibona khona ukuthi umsebenzi wakhe wawunjani, ubudlelwane no "Pajarito", nokufa okuxakile kukaTeresa noPajarito.
Isahluko esilandelayo sisitshela futhi ngokudlule, mayelana ukuthi uJavier Miranda waba kanjani "umngane" womphathi weSavolta, ubungani obuseduze abuzuze ngesikhathi esifushane kangaka ... Futhi-ke, kugxile ekuphelelweni kwephathi yonyaka, lapho umdali nomqondisi omkhulu weSavolta bedutshulwa babulawa emcimbini wakhe naphambi kwawo wonke umuntu olapho.
Isahluko sesine sokugcina, isahluko sesine, sisinikeza ukuqonda okuthe xaxa ngoba, yize sizoba nokulandelana okuhlukile endabeni enkulu, kulandela icebo lokuthi kwenzekani ngemuva kokufa kukasomabhizinisi, ukuthi uLepprince, umphathi womngani kaMiranda, ufika kanjani edome lamandla, amaphrojekthi onawo, kanye nezenzo ezahlukahlukene ezenzayo ukwenza isiqiniseko sokuthi akekho umuntu ozozehlisa kuleyo ndawo.
Ekugcineni, isahluko sesihlanu sikhuluma nge uphenyo lwamaphoyisa, ukuthi ulandela kanjani eduze bobabili uLepprince noMiranda, kanye nesimo salaba balingisi ababili: oyedwa phezulu, kanti omunye udlula esimweni esibi impela.
Izahluko zengxenye yesibili
Ingxenye yesibili yale ndaba nayo ingahlukaniswa ngamabhulokhi amabili, ngakolunye uhlangothi, izahluko ezinhlanu zokuqala; kolunye, okuhlanu okugcina.
Ezahlukweni ezinhlanu zokuqala kunezindaba ezicishe zibe zintathu eziguqukayo nezithi zisho indaba yabalingiswa abathathu: okokuqala, uJavier Miranda nokuthi washada kanjani noMaría Coral (ngaphezu kwakho konke okwenzekayo); okwesibili, iphathi lapho kuhlala khona iLepprince nokuthi kumele abhekane kanjani nezinkinga enkampanini yakhe (engasebenzi) kanye nabaninimasheya (omunye wabo obaluleke kakhulu); kanti okwesithathu, okusibuyisela emuva kokwedlule, sikhuluma ngendaba yofakazi ofakaza ngokufa kukaPajarito, ecacisa amaphuzu amaningi avela engxenyeni edlule.
Ekugcineni, i- izahluko zokugcina zilandisa ngendlela eqondile konke okwenzekayo nabalingiswa. Kuyindlela yokuxhuma amachashazi bese kuthi ekugcineni kuphele izinhlamvu, ezinye zibe nezikhathi ezibuhlungu, kanti ezinye akunjalo.
Abalingiswa abavela eQinisweni ngecala leSavolta
Manje njengoba usuyazi isahluko ngesifinyezo sesahluko salokho okwenzeka emlandweni ka-Eduardo Mendoza, asifuni ukukushiya ngaphandle kokuhlangana nabalingisi abakhulu. Kodwa-ke, asizogxila kubalingiswa (ngemuva kwakho konke osuvele ukubonile), kepha kunalokho amakilasi omphakathi amelwe kuzo zonke izahluko. Khumbula ukuthi sikhuluma ngeBarcelona lapho kunamazinga amaningana omphakathi.
Yilezo zinhlamvu ezinesimo esihle senhlalo, ezicebile, ezinamandla ... Kulokhu, abalingiswa abaseQinisweni mayelana necala likaSavolta abazongena kuleli klasi bangabaninimasheya nabaphathi, isibonelo yena USavolta, uClaudedeu, uPere Parells ... Ngalokhu, ukukhohlisa, ukwenza izinto ngaphandle kokubanikeza noma yikuphi ukuphazamiseka (noma ngabe bazi ukuthi abakwenzayo akulungile), njll. kujwayelekile.
Kepha awekho amadoda kuphela, futhi nezithandani zabalingiswa zithonywe yileli banga lomphakathi, noma, kulokhu, zifana ne- «vase woman», okungukuthi, zigobela kulokho okushiwo amadoda futhi zikhathalela kuphela "Zenze sengathi "emphakathini.
Ngokuqondene nesigaba esiphakathi, iningi limelwe yi izikhulu, noma abantu abanakekela imisebenzi yokuphatha neyokwahlulela…, kodwa ngasikhathi sinye kukhona ukungabaza ngokuthi lokhu abakwenzayo kulungile noma cha. Isibonelo, ummeli uCortabanyes noma amaphoyisa afunda leli cala.
Isigaba senhlalo esikhokhelwayo
Encwadini yenoveli, leli qembu iba ngufakazi walokho okwenzeka kuwo wonke umlando, nokuthi besaba ukuthi ingahle ibahlasele ngendlela engeyinhle. Njengoba ungathi "khokha idada."
Ake sithi yizinga eliphansi kunawo wonke lesimo senhlalo, futhi bangabalingiswa okuthi, yize bengathuthuki (ngoba umbhali ugxile konxiwankulu abaphezulu), kukhona abanye abagqama kancane.
Ekugcineni, kulesi sigaba singasho ukuthi kukhona lezo zinhlamvu ezinesimo esiphansi kakhulu kunaleso esedlule, okuyi, ngandlela thile, benqatshelwe abakwenzayo, noma ngabe ukuthengisa ngomzimba, ukuba yiziqhwaga, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Isifinyezo esithi "Iqiniso ngecala leSavolta", lika-Eduardo Mendoza
UTheo Palacios. Ingxoxo nombhali weLa boca del diablo